अमला खाएर पानी पिउँदा किन मुख गुलियो हुन्छ? - Nepali Health Media
अमला खाएर पानी पिउँदा किन मुख गुलियो हुन्छ?
के तपाईंले कहिल्यै ख्याल गर्नु भएको ? कि जब तपाईं अमला खानु हुन्छ र के हि क्षण भित्र तुरन्त पानी पिउनु हुन्छ भने तपाईंले पिएको पानी तपाईंलाई गुलियो भएको महसुस हुनेछ ।
किन अमला खाएर पानी पिउँदा मुख गुलियो हुन्छ ?
यो हुनुको पछाडि को बैज्ञानिक कारण के हो भने अमला मा पाइने बिभिन्न रसायनिक तत्वहरु मध्य ग्यालेट र टिनेट नामक रसायनिक तत्वहरु अधिक मात्रामा अमलामा पाइने गर्दछ ।
हाम्रो आँखाले कसरी काम गर्छ ?
आगोको ज्वाला किन सधैं माथि तिरै फर्कन्छ ?
हवाई जहाजहरु अत्ति माथिबाट उडाउदा के हुन्छ ?
जब हामि अमला खान्छौं तब अमलामा भएका ति रसायन तत्वहरु (ग्यालेट र टिनेट) ले हाम्रो जिब्रोलाई खुम्चाउने र जिब्रो मा भएका स्वाद थाहा पाउने तन्तुहरुलाई के हि क्षणको लागि निस्क्रिय बनाउने गर्दछ।
त्यति बेला हामीले पानीपिउँदा ति जिब्रोमा भएका रसायन तत्वहरु पानी ले पखालिने गर्दछ र त्यो बेला हामिलाई मुख गुलियो भएको महसुस हुँदछ ।
यहि कारण अमला खाएर पानी पिउदा गुलियो भएको अनुभव हुने गर्दछ ।
Tags: #nepalihealth #nepalihealthtips #sciencefacts #नेपाल health news Helth tips Latest nepali health nepali health media Nepali Health tips News news2nepal science facts science facts nepal Viral news nepal अमला अमला अचार बनाने की विधि अमला का अचार अमला का अचार बनाउने तरिका अमला को फाइदा नेपाली नेपाली हेल्थ वैज्ञानिक तथ्य स्वास्थ्य जानकारी हेल्थ टिप्स
Previous चन्द्र ग्रहण र सुर्य ग्रहण कसरी र किन लाग्दछ ?
Next #सुर्य मुखी फुल किन सुर्य तिरै फर्किन्छ ?